ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခ အဖြေပေါ်ရေး အမြန် ဆောင်ရွက်မည်ဟုဆို | ဧရာဝတီ
နန်းဆိုင်နွမ်| September 18, 2012 | Hits:2,640
3 | | ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် သတင်းစာဆွေးနွေးပွဲတွင် ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မျိုးမြင့်၊ သတင်းစာဆရာ မောင်ဝံသ၊ အနုပညာရှင် ဇာဂနာ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီး၊ ဒေါက်တာ
ကျော်ရင်လှိုင် ( Myanmar Egress)၊ ဘူမိဗေဒ ပါမောက္ခ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ်တို့ ဦးဆောင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုကော်မရှင်သည် ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် လေ့လာစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆပ်ကော်မတီ ၈ ခု ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အသီးသီး တာဝန်ယူထားသည့် ကဏ္ဍအလိုက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ဆေးချက်များကို နိုဝင်ဘာလတွင်
နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်ပြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ချိန်တွင် ပြီးစီးမှု မရှိပါက အချိန်အနည်းငယ် ထပ်မံယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ် ထုတ်ဝေ
ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသော မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကို ပြန်လည်ကြွလာခွင့်ပြုပြီ
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website true talker September 19, 2012 - 12:42 am	Please do it fair and square. Tayar ko nut saunt pha tae.
Reply	david September 19, 2012 - 10:12 am	လူသုံးယောက်မုဒိန်းမှုကပေါ်ပြီးသေဒဏ်တောင်ပေးပြီးပြီး တောင်ကုတ်လူသတ်ပွဲကိုလူသုံးရာ
၀မကျဘူးထင်တယ်။ဘယ်သူမှာတာဝန်းရှိသလဲ ပြည်ထောင်စုအစိုးရလာ ပြည်နယ်အစိုးရမှာလာ၊ မဟုတ်ရင်လည်းပထမ ၁၆ ယောက်နှင့်ဖွဲထာ.တဲ့ကော်မရှင်မှာတာဝန်းရှိသလာဆိုတာကိုပွင်လင်မြင်သာအောင်လုပ်